ग्लास भरिएको रूबी पहिचान, फिशर भरिएको रूबी। मूल्य प्रति क्यारेट - भिडियो
सीसा गिलास वा यस्तै समान सामग्रीको साथ माणिक भित्र भित्ताहरू वा टुक्राहरू भर्नु नाटकीय ढंगले ढु of्गाको पारदर्शितामा सुधार गर्दछ, गहनाका अनुप्रयोगहरूको लागि पहिले अयोग्य रुबी फिट बनाउँछ। ग्लास भरिएको रूबी पहिचान एकदम सरल छ र यसको मूल्य उपचार नगरेको रुबी भन्दा बढी किफायती छ।
सीसा गिलास भरिएको रूबी
प्रक्रियामा असर गर्न सक्ने सबै सतह अशुद्धताहरू उन्मूलन गर्न कुनै न कुनै ढु्गा पूर्व-पालिश गरिन्छ
कुनै न कुनै ढु stone्गा हाइड्रोजन फ्लोराइडले सफा गरियो
पहिलो हीटिंग प्रक्रिया जुन कुनै फिलरहरू थपिएका छैनन्। तताउने प्रक्रियाले फ्र्याक्चर भित्रका अशुद्धताहरू मेटाउँछ। जे होस्, यो १ 1400०० डिग्री सेल्सियस (२2500०० ° एफ) तापक्रममा गर्न सकिन्छ तर यो प्रायः around ०० ​​डिग्री सेल्सियस (१ 900०० ° एफ) को तापक्रममा देखा पर्दछ किनकि रूटेबल रेशम अझै अक्षुण्ण छ।
बिभिन्न रासायनिक additives को साथ एक इलेक्ट्रिक ओभनमा दोस्रो हीटिंग प्रक्रिया। बिभिन्न समाधान र मिक्सहरू सफल भएको देखाइएको छ, तथापि हालसालै सीसा-युक्त गिलास-पाउडर प्रयोग गरिन्छ। रूबी तेलमा डुबाइन्छ, त्यसपछि पाउडरले ढाकिएको हुन्छ र टाइलमा इम्बेड गरिन्छ र ओभनमा राखिन्छ जहाँ यसलाई एक अक्सिडाईंग वातावरणमा एक घण्टाको लागि 900 ०० डिग्री सेल्सियस (१ 1600०० डिग्री फारेनहाइट) मा तताइन्छ। सुन्तला रंगको पाउडरले तापलाई पारदर्शीमा पहेलो रंगको पेस्टमा रूपान्तरण गर्दछ, जसले सबै फ्र्याक्चरहरू भर्दछ। चिसो पछि पेस्टको रंग पूर्ण पारदर्शी हुन्छ र नाटकीय रूपमा रूबीको समग्र पारदर्शितामा सुधार हुन्छ।
यदि कुनै र color थप्न आवश्यक छ भने, शीशा पाउडरलाई "बृद्धि" गर्न सकिन्छ तामा वा अन्य धातु अक्साइडहरू साथ साथै तत्वहरू जस्तै सोडियम, क्याल्शियम, पोटेशियम आदि।
दोस्रो तताउने प्रक्रिया तीनदेखि चार पटक दोहोर्याउन सकिन्छ, बिभिन्न मिश्रणहरू लागू गरेर। जब माणिक भएको गहना मर्मतका लागि तातिन्छन्। यो बोरासिक एसिड वा अन्य कुनै पनि पदार्थले ढाक्नु हुँदैन किनभने यसले सतहमा नर्क लगाउन सक्छ। यसलाई हीरा जस्तो सुरक्षित गर्नु आवश्यक पर्दैन।
ग्लास भरिएको रूबी पहिचान
उपचार 10 and loupe प्रयोग गरेर गुफा र फ्र्याक्चरमा बुलबुले नोटिंग द्वारा पहिचान गर्न सकिन्छ।
मँ कसरी भन्न सक्छु कि रूबी कांच भरिएको छ?
कम्पोजिट रुबीको सबैभन्दा कुख्यात दृश्य विशेषता आन्तरिक ग्यास बुलबुले हो। यी एकल क्षेत्र वा बबलको बादल हुन सक्छन्, सपाट वा गोलाकार, र ती वस्तुतः सबै fissure भरिएको माणिकमा उपस्थित छन्। धेरै जसो अवसरहरूमा, तिनीहरू बिना सहायताको आँखाले पनि देख्न सक्छन्।
कांच भरिएको रुबी प्राकृतिक छ?
हो, यो उपचारित ढु stone्गा हो। प्राकृतिक रूबी जस्तो गहिरो रातो र bring ल्याउन तातो र एलिमेन्ट प्रयोग गरी सिर्जना गरिएको, सिसा शीशाले भरिएका माणिकाहरू ढु in्गामा भएका अस्थिहरू भर्न उपचार गरिन्छ। यी रत्नहरूले रूबी राम्रोसँग नक्कल गर्न सक्छन्, तर तिनीहरू शक्ति र लचिलोपनसँग मेल खाँदैनन् जुन वास्तविक ढु stones्गाहरूमा छन्।
के कांच भरिएको माणिक बेकार छन्?
ग्लास भरिएको रूबी मूल्य उपचार नगरेको रुबी भन्दा धेरै सस्तो छ। उपचारको प्रभावकारिता आश्चर्यजनक छ, किनकि यसले कोरुन्डमलाई रूपान्तरण गर्दछ जुन अपारदर्शी र लगभग बेकम्मा पदार्थ हुन्छ जुन गहनामा प्रयोगको लागि पर्याप्त पारदर्शी हुन्छ। वास्तवमा, ढु stones्गाहरू एक अनुपयुक्त क्रेतालाई धेरै आकर्षक लाग्न सक्छ। यो समान देखिने उपचार नगरीको ढु than्गा भन्दा १० देखि तेहसान समय सस्तो हुन सक्छ।
हामी रि ring्ग, झुम्का, कंगन, हार वा लटकनको रूपमा फिशर भरिएको माणिकको साथ कस्टम गहनाहरू बनाउँछौं।
सिंथेटिक तारा रूबी
ट्याग रूबी, तारा, सिंथेटिक